Maraykanka oo damacsan in la xanibo hantida hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi - BBC News Somali
Image caption Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi
Maraykanka ayaa ku taliyey in cunaqabtayn dhinacyo badan ah Qaramada Midoobay ku soo rogto Kuuriyada Woqooyi, kuwaas oo ay ku jirto xayiraad la saaro saliidda loo dhoofiyo iyo in la xannibo hantida hogaamiyahe Kim Jong-un.
Hindisahan Maraykanka ayaa qoraal ahaan loogu qaybiyey xubnaha Golaha Ammaanka waxaanay arintaasi daba socotaa tijaabadii lixaad ee nukliyeerka ah ee Kuuriyada Woqooyi iyo tijaabooyinkeeda is daba joogga ah ee gantaalaha.
Pyongyang waxay sidoo kale sheegatay in ay samaysay qumbulad Haydarojiin ah waxaana sidoo kale sii kordhaysa khatarta ah in ay gantaalo ku weerari karto Maraykanka.
Shiinaha iyo Ruushka ayaa se la filayaa in labadooduba diidaan in cunaqabatayno dheeraad ah lagu soo rogo.
Haatan ba waxa saaran Kuuriyada Woqooyi cunoqabatayn adag oo Qaramada Midoobay ku soo rogtay ujeedada laga leeyahayna tahay in lagu dirqiyo hogaanka dalkaas in uu joojiyo barnaamijkiisa hubka.
Bishii Ogost ayaa cunaqabatayn hor lahayd oo la saaray waxa dalkaas lagaga joojiyey dhoofinta dhuxul dhagaxda taas oo Kuuriyada Woqooyi ku wayday dakhli dhan hal bilyan oo doolar una dhiganta saddex meelood meel ahaan dakhliga dalka ka soo gala waxyaabaha uu dhoofiyo.
Ruushka iyo Maraykanka oo ka wada hadlay xiisadda Kuuriya
Kuuriyada Woqooyi oo ku hanjabtay tallaabo dheeraad ah
Hindisahan cusub ee Maraykanku wuxu doonayaa in gabi ahaan ba dalkaa lagaga xayiro shidaalka iyo waxyaabaha ka soo baxa saliidda qaydhiin ee dalkaa loo dhoofiyo iyo sidoo kale in la xayiro wax soosaarka dharka ee dalkaasi dibadda u dhoofiyo.